Ngwaọrụ kachasị mma maka onyinye ụbọchị nne | Gam akporosis
Ngwaọrụ kachasị mma maka onyinye ụbọchị nne
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Ngwaọrụ ndị ọzọ
Otu n'ime ụbọchị ndị kachasị mkpa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ niile na-abịaru nso. Bọchị ndị nne bụ ụbọchị pụrụ iche, ma ọ bụrụ na nne gị bụkwa onye pụrụ iche, ọ ga-enwerịrị ezigbo onyinye. Ọ bụrụ na nne gị bụ nke oge a na nke oge a, taa anyị ga-enye gị ụfọdụ echiche ka onyinye gị wee ruo ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ nne gị na ị na-enye ya osisi ma ọ bụ akwụkwọ mgbe niile, echefula na ndụmọdụ mbụ kachasị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka nne gị jide ma na-enwe ihe ijuanya metụtara teknụzụ nke a bụ post ị na-achọ.
1 Nye a gadget kasị nkà na ụzụ nne
1.1 Ikpuchi ụra na egwu
1.2 Ìhè maka akpa
1.3 Xiaomi nke AirDots
1.4 Obere presso NS
2 Na smartphone?
Nye a gadget kasị nkà na ụzụ nne
Mgbe anyị na-eche maka onyinye anyị nwere ike inye nne, isiokwu ndị a na-ahụkarị na-apụta. Anyị ji n'aka na ị naghị achọ ịzụrụ otu ihe mgbe niile. Onweghikwa otu onyinye a na-enye ya. N'ihi ya, echefula nkọwa nke onyinye kachasị na nke oge a na anyị na-adụ gị ọdụ.
Ikpuchi ụra na egwu
Oge izu ike dị nsọ nye onye ọ bụla. Ọbụna nke dịịrị nne nke ogologo oge ọrụ ma ọ bụ ụbọchị ụlọ. N’ụlọ jupụtara na ụmụaka, ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ihi ụra. Ma ọ bụ enwere ike, jide nrọ ahụ mgbe anyị banyere n'àkwà. Maka nke a anyị na-eweta ngwaahịa dika nke mbu dika odi nkpa.
Ihe nkpuchi ụra bụ ihe dị mkpa maka ndị chọrọ obere ọchịchịrị. Karịsịa mgbe ịchọrọ izu ike na awa na ìhè ehihie. Gadjet mbụ a, na mgbakwunye na inye anyị ọchịchịrị mkpa ịda n'ụra, awade ekwe omume nke na-ege ntị music. N'ihi a njikọ Bluetooth ị ga-enwe niile music na ekwentị gị dị.
Iji ihe nkpuchi ura a anyị nwere ike ikewapụ onwe anyị n'èzí mkpọtụ. Ya mere, itinye uche na egwu kachasị amasị anyị, ma ọ bụ jiri ọba egwu, anyị nwere ike nweta izu ike achọrọ. Ngwa na ị chọrọ ịnwale na na ịpị ebe a ị nwere ike ịzụta ugbu a na Amazon. Ọ bụ na nne anyị ekwesighi ezumike dị otú ahụ?
Ìhè maka akpa
Oge ụfọdụ akpa nne na-aghọ oghere ojii. Ihe ndị anyị ma na anyị etinyela n’ime ya na-apụ n’anya. Ọ na-eme nke ukwuu na n'ihi ọtụtụ ihe bu ndi ebu n'akpa, o siri ike ịchọta ihe anyị chọrọ n’oge kwesịrị ekwesị. Ugboro ole ka o werela ruo mgbe ebighi ebi iji nweta mkpịsị ugodi ịbata n'ụlọ ahụ?
Nke mere na e nwere ọkụ n'ime akpa ndị nne, n'ụzọ nkịtị, anyị na-amam a nnọọ ịmata gadget. Sol mini bụ ọkụ izizi maka akpa. Obere tugwa-dị ka ọkụ ọkụ na-emegharị akpaaka mgbe anyị chọrọ ịchọ ihe. Ngwa di nfe ma nke gha aghaghi ichefu oge maka ndi mmadu na-ekwo ekwo n ’uwa, ndi nne anyi.
Na nha nke 5 centimeters na dayameta, na ibu nke 20 grams, Sol mini bụ naanị ihe na-efu na akpa nne. Ọ ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka mgbe ọ na-achọpụta ịdị nso nke aka. Ya mere, n'ime akpa ahụ ga-ahụ ka ịchọta pen ahụ naanị mgbe ịchọrọ ya. Odika ihe oma eweputara? Nne gị kwesịrị ka Sol Mini akpa oriọna
Xiaomi nke AirDots
Onye na-anaghị enwe mmasị n’egwú ha na-egwu ebe ọ bụla ha na-aga? Maka nke a anyị na-adụ gị ọdụ ihe ga-abụrịrị onyinye. Fọdụ wireless ekweisi na Bluetooth 5.0 Ha na enye ogo di egwu di uku. Ha nwekwara a mara mma nkịtị anya na-adọrọ anya.
Ọ bụrụ na nne gị hụrụ egwu n'anya nke a bụ ihe doro anya. Site na ekweisi Xiaomi wireless i nwere ike kporie egwu kachasị amasị gị mgbe ị gara ịme egwuregwu, mgbe ị na-agba ụgbọ oloko, ma ọ bụ n'oge ọrụ. Nwere ike ịzụta ugbu a na Amazon Ekweisi Xiaomi Airdots ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri.
Ekele diri igwe okwu ya enweghị aka ka ị wee nwee mkparịta ụka mgbe ị na-eje ije. Kedu ihe ọzọ igbe ahụ bụkwa chaja maka ekweisi ya mere ị ga-enwe nnwere onwe zuru ezu iji nọrọ ụbọchị zuru ezu jikọọ na egwu gị na-enweghị oku efu.
Onye ọ bụla nke ekweisi nwere a 40 mAh batrị nke dịka onye nrụpụta si enye anyị oge ruo awa 6 nke iji. Su chaja nwere a 300 mAh batrị ya mere na-atụghị egwu ịbụ nkewa. Ọzọkwa, ka mgbanwe ahụ zuru oke, Xiaomi soro ekweisi 3 ụzọ ntị ntị dị iche iches ka ahụmahụ ah zuru oke.
Obere presso NS
Na Spain, dịka ọmụmaatụ, karịa Nde mmadụ 22 na-a drinkụ opekata mpe otu kọfị kwa ụbọchị. Onu ogugu kọfị anyị na-a drinkụ kwa ụbọchị ruru ihe dị ka iko 3,6 kwa mmadụ. Otu oriri, nke kọfị, nke na-akwụsịbeghị ịrị elu ma ọ dịkarịa ala afọ 35. Kedu onye na-anaghị achọ ị aụ ezigbo kọfị n'ụtụtụ?
Maka ndị ahụ, na ndị nne a, ndị hụrụ kọfị n'anya, mana ha enweghị oge iji nọdụ ma andụọ ya nwayọ, taa anyị ewetara gị ngwa ngwal. Na Obere presso NS Ọ bụ obere obere kọfị na-eme kọfị kwekọrọ na capsules ndị ama ama Ngwa ọrụ kọfị Nespresso.
Ọ bụrụ na nne gị nwere mmasị ị haveụ ezigbo kọfị, mana n'ihi ọsọ ọ na-a toụ otu n'ime ndị ọrụ igwe, ọ ga-ahụ nke a n'anya. Ga - achọ obere mmiri ọkụ, yana capsule kọfị kachasị amasị gị. Ekele dịrị onye na-eme kọfị mara mma, ị pụrụ ịnụ ụtọ a mma kọfị n'ebe ọ bụla onye obula jere.
Enweghị iko, igwe kọfị Minipresso NS gụnyere obere iko ịghasana. Wunye obere mmiri ọkụ (45 ml), fanye capsule kachasị amasị gị ma kpughee iko ahụ. Already nweela kọfị ị kwesịrị ị toụ ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ. Onyinye pụrụ iche pụrụ iche maka ndị maara ekele kọfị. Pịa ebe a ma zụta Minipresso NS na Amazon.
Ọ bụrụ na ị maghị onyinye ị na-aga ịzụtara nne gị, mara na taa anyị nyere gị mmụọ nsọ. Obere ngwa ga-eme ka ndụ gị dị mfe. Ma ọ bụ na ha ga-ahụ na ị ga-anụ ụtọ ihe niile ị kwesiri. Ndị a bụ echiche ole na ole anyị nwere olile anya na anyị enyerela gị aka. Ọ bụrụ n’ikpebie inye nke ọ bụla n’ime amụma ndị a, echefula ịgwa anyị otu o siri gaa.
Ma buru n'uche na ọ bụrụ na ị masịrị nke ọ bụla n'ime atụmatụ anyị, a onyinye na ọ bụ ihe ịga nke ọma bụ ọhụrụ ekwentị. Inye gị ama bụ mgbe ọ bụla kpatara ememme. A na-anabata ekwentị ọhụrụ mgbe niile. Iji hụ nke otu bụ otu, lee anya na nyocha anyị kachasị ọhụrụ ma ị ga-ahụ nke dabara na mmefu ego gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Ngwaọrụ kachasị mma maka onyinye ụbọchị nne
Site San Jordi Free akwụkwọ. (Per Sant Jordi LLibres n'efu)
Anyị na-etinye wijetị nke 4 kacha mma ndepụta ngwa ngwa ihu na ihu